Antony 12 no mahatonga ny lehilahy hiverina herinandro na volana maro taty aoriana - Fifandraisana
Nandefa hafatra ho anao fotsiny i Ex?
Mety hampisavoritaka izaitsizy tokoa rehefa miverina amin'ny manga ny tovolahy, volana maro taorian'ny nifaranan'ny raharaha.
Andao andramo ny famaritana ny toetrany ary fantaro izay mitranga. Ireto misy antony 12 mety hahatonga azy hiverina rehefa afaka volana maromaro…
1. Malahelo anao izy.
Mahazo nostalgic isika rehetra indraindray. Angamba nahita zavatra nampatsiahy anao momba anao izy, na vao nandinika zavatra vao haingana izy.
Na izany na tsy izany, malahelo anao tokoa izy sy ny zavatra niarahanareo. Mety tsy hahatratra ny fiarahana izy, na mety halahelo azy hoe iza izy tamin'izy niaraka taminao.
Maniry anao hiverina ianao satria malahelo ny toe-javatra teo aloha.
Raha heverinao fa mety hahomby ny fanandramana indray, dia tadiavo izany! Henoy ny tsinainao, alao antoka fa samy nanana fotoana ampy ianao mba hahazoana antoka fa tena, tena te-hiverina miaraka, ary zahao fa efa niasa tamin'izay zavatra nanakana anao farany ianao.
Toy izany koa, avela tsy hahita olona ianao fa tsy te hiverina ny fifandraisana - ary tsy maninona ny milaza azy izany aminao.
Mety hanapa-kevitra ianao fa tsy te hiresaka aminy satria sarotra loatra, ary te hifantoka fotsiny amin'ny fialana aminy ianao ary mandroso, na inona na inona ny tsy fahitanao azy.
Tsy izay rehetra tianay no mety amintsika, ary mila ataonao loha laharana ny laharam-pahamehana.
2. Mahatsiaro tena ho meloka izy tamin'ny fomba nitondrany anao.
Raha niverina volana taloha ny anao taloha dia mety tsy manandrana mamerina anao izy, fa kosa miala tsiny ary raiso ny andraikitrao amin'ny fihetsiny.
Ny fananana fotoana kely hisarahana dia mety nanome azy ny fotoana nilainy hisaintsainana ny zavatra nataony ary tena hieritreretany izay anjara asany teo amin'ny fifandraisana sy ny fisarahana.
Mety hahatsapa ho mahatsiravina izy amin'ny fomba nitondrany anao, na ny fomba sy ny antony nifaranana, ary te hanonitra izy amin'ny fifonana.
Anjaranao ny manapa-kevitra ny amin'ny fandehany - raha te hiresaka zavatra izy nefa mbola tsy mahazo aina amin'izany ianao dia angataho izy hanaja ny fanirianao ary hanome fotoana bebe kokoa anao.
Angamba azony atao ny mandefa fialantsiny amin'ny mailaka aminao ary azonao atao ny mamaky azy amin'ny fotoananao.
Na, mety aleonao manakatona tanteraka ny resaka satria tsy miraharaha izay ratsy tsapany ianao, na tsy tianao ny hamerina ilay zava-nitranga. Safidinao io!
3. Tsy nahomby ny fikasany hilalao an-tsaha.
Mety efa nanapaka ny fifandraisana ny anao taloha satria naniry ny tsy hanambady izy mandritra ny fotoana kelikely.
Matetika mitranga izany, ary mety misy antony maro: tsy mbola mpitovo mihitsy izy, niova ny fiainany (asa vaovao, namana vaovao, sns.) Ary te handinika bebe kokoa ny safidiny izy, na tsy azony antoka fa vonona hanolo-tena.
Mazava ho azy, mety ho antony hafa izany, ary azo inoana fa tsy ho fantatrao mihitsy!
jake paul ary apetraho malone
Raha te hilalao an-tsaha izy dia mety te-hifandray ankizivavy maro ary ‘hanao tombony indrindra’ amin'ny maha mpitovo. Ie, maharary ny mieritreritra, fa azo inoana fa ny tena zava-misy.
Ny antony nahatonga azy hiverina mandady dia satria tsapany (taitra, horohoro!) Fa ny mpitovo sy ny mandry manodidina dia tsy izany daholo.
Mety hahafinaritra, azo antoka, fa samy hafa be koa ny hoe a fifandraisana manolo-tena amina olona tena tianao.
Mety ho tsapany fa ny maha mpitovo dia tsy mahafinaritra toy ny noeritreretiny fa hisy, ary izao dia mety te hanana fifandraisana indray - aminao.
Eritrereto ny tianao hamerenana azy na tsia, raha safidy io aza. Tsy maninona ve raha fantatrao fa natory manodidina izy, ary mieritreritra ve ianao fa afaka mampandeha azy amin'ity indray mitoraka ity?
Mila mampiseho fanajana anao izy ary manazava fa ianao no lohalaharana fa tsy safidy miverina satria nankaleo natory teo izy!
4. Tiany ny tsy azony.
Nanao hetsika famotehana herinaratra mahazatra ianao - nahavita azy ianao, nifantoka tamin'ny tenanao ianao, ary nandalo famirapiratana ara-pihetseham-po sy ara-batana.
Angamba ianao amin'ny endrika tsara indrindra amin'ny fiainanao, na tamin'ny farany ianao nanana herim-po hangataka an'io asa io.
Na inona izany na inona dia tsikariny. Hitany fa mankafy mahaleo tena ianao, sambatra sy salama ary miroborobo - tsy misy azy…
Voalohany, ny ego-ny dia mety ho simba kely amin'izany. Manontany tena izy hoe ahoana no nahaizanao velona raha tsy misy azy (mahery, fantatsika, fa izany no tena eritreritry ny bandy sasany), ary mety hanontany tena raha mitazona anao amin'ny fomba hafa izy.
Mety tsy dia tsara izany, ka mety te hanaporofo izy fa tsy misy ifandraisany aminy izany amin'ny fiverenana miaraka aminao. Raha azonao atao hatrany ny manapotika ny tanjonao raha mbola miaraka aminy indray ianao dia tsy mety ho izy no olana teo aloha, sa tsy izany?
Faharoa, tsy misy zavatra manintona kokoa noho ny taloha iray izay nifindra ary tsy mila anao intsony. Tsy salama, azo antoka, fa marina izany.
Ankehitriny satria tsy afaka manana anao izy, ary manao tsara ianao, dia maniry anao hiverina. Nahaliana azy ity kinova vaovao, mahaleo tena sy matoky anao ity ary te hiaraka aminao izy.
Ny fahafantarana fa tsy afaka manana anao izy (na satria ianareo nanary azy, na satria nifindra fotsiny ianao) dia hahatonga azy ho adala, ary vao mainka handrehitra ny faniriany anao izany.
Raha eo amin'ity haavo mandroso ity ianao dia mety tsy te-hanao zavatra aminy! Nifantoka tamin'ny fahazoana ny tenanao ianao hatrizay, ka te-hiatrika loza mety hiverenana ve ianao ary hamoy ny fandrosoana vitanao fony ianao niasa tamin'ny fananganana ny tenanao?
Ianao irery no afaka mamaly an'io…
5. Tsy nandeha ny safidiny hafa.
Andao lazaina hoe nifarana ny fifandraisanareo satria hitanao fa namitaka anao izy. Nandeha nitokana ianareo, lasa niaraka tamin'ny tompovavy izy - ary ankehitriny dia nipoitra indray izy volana maro taty aoriana.
Tsy mitaky ny hakingana amin'ny ho avy fa tsy nety ny zavatra niaraka tamin'ny zanany vavy…
Raha sendra niverina tampoka teo amin'ny fiainanao izy ary feno fandokafana, dia tena azo inoana fa nandeha nianatsimo niaraka tamin'ny zazavavy nofitahiny taminao ny zavatra.
Tiany hiverina ianao satria ny safidiny hafa tsy nihena toa ny nantenainy.
Averina indray, mila miezaka ianao raha faly safidy iray fa tsy laharam-pahamehana . Izy dia efa nifidy olon-kafa noho ianao, ka mahazo aina ve ianao amin'ny fiarahanareo miaraka amin'ny fahafantarana fa nahafoy anao ho an'ny tovovavy hafa izy?
Tena te-hiverina aminao ve izy, sa ny fiarovana fotsiny no tadiaviny satria simban'ny olon-kafa ny ego-ny?
6. Izy dia nanana fifandraisana ratsy ary mahatsapa izay very.
Ity iray ity dia mitovy amin'ny etsy ambony, fa tsy mitovy kely, ka mendrika hodinihina. Mety tsy navelany ho olon-kafa ianao, indrindra fa nifarana tamina fifandraisana hafa izy taoriana kelin'ny nisarahanao.
Mety ho tsapany fa tsara ny nahazo azy taminao, tsotra izao satria nahatsiravina ity fifandraisana hafa ity. Ankehitriny rehefa nahazo zavatra hafa hampiasaina izy amin'ny fampitahana dia azony atao ny mahatsapa fa tsara vintana no azony taminao!
Mety ho tonga tamin'ity fehin-kevitra ity izy nefa tsy niaraka tamin'ny olon-kafa. Mety ho tsapany fa tena nahafinaritra azy ny niaraka taminao sy ny halehiben'ny fifandraisana.
Ny elanelam-potoana hisarahana matetika dia afaka manome fomba fijery tena ilaina sy mazava. Mety mifandray izy izao mba hampahafantatra anao ny lanjan'izy ireo aminao, ary mampalahelo azy izy fa tsy tsapany izany taloha.
Mety mety aminao izany ary mety ho tianao tokoa ny maheno ireo zavatra ireo. Na izany aza, mila asehony anao tsy tapaka fa mankasitraka anao izy, ary miaina mifanaraka amin'ireo soatoavina ireo raha toa ka handeha io fifandraisana io. Tsy afaka miverina amin'ny fiainana mora Izy ary handray anao ho azy indray!
7. Nilaza taminy ny namany na ny fianakaviany.
Efa teo daholo isika. Tapitra ny fifandraisana, na inona na inona antony, ary, aorian'ny volana vitsivitsy nilomano, ny olon-tianao dia manome hevitra momba ny fomba tokony hanandramanao indray.
Angamba leo azy ireo ianao mijaly fatratra na mino marina tokoa izy ireo fa tokony hanome azy io indray. Na izany na tsy izany dia mety ho izany no nitranga raha niverina volana taloha ny anao taloha.
Mety notantarain'ny namana vitsivitsy izy fa ianao no zavatra tsara indrindra nanjo azy. Angamba efa nilaza ny fianakaviany fa tokony hiezaka ny hiara-honina aminao tokoa izy satria tena nahasoa azy ianao ary tena faly kokoa taminao noho ny tsy misy anao izy.
Azo antoka fa zavatra tokony hodinihina io raha toa ka tampoka tampoka ny taloha rehefa afaka volana maro tsy nifandraisana!
8. Mahatsiaro ho manirery izy na mila fanamafisana ny ego.
Manirery isika rehetra indraindray, ary maro amintsika no 'mihemotra' hanatratra ireo taloha.
Zoma alina izao, nivoaka nisotro zava-pisotro vitsivitsy izahay, ary irery irery izao ao an-trano. Mamo mamaky sary taloha izahay miaraka amin'ny taloha izay toa faly, na angamba mifamaly daholo ny namanay ary saro-piaro amin'ny fifankatiavan'izy ireo izahay.
Na izany na tsy izany dia mahatsiaro ho manirery isika - koa maninona raha tsy mandefa hafatra amin'ny sakaizantsika taloha ary mandrefy fotsiny ny fihodinana?
Mety hahatsapa fako momba ny tenany izy - angamba mbola mpitovo izy ary mahatonga azy hahatsapa ho tsy mahasarika. Mety manantena izy fa hidera azy ianao ary hahatonga azy hahatsapa ho tsara kokoa momba ny tenany, toa ny nataonao fony ianao niaraka.
Mety mila koa izy ianareo te-hanana azy - raha mandefa hafatra aminao izy ary faly ianao mihaino azy ary maniry mafy ny hiaraka indray, hahatsapa izy fa tadiavina sy irina ary manintona.
Raha izany no izy dia mety tsy ho liana amin'ny zavatra matotra na maharitra izy, koa mitandrema!
Mety manirery fotsiny izy ary malahelo kely amin'ny tenany, ary manantena izy fa homenao azy ny fitiavana sy ny saina tadiaviny.
9. Nandany fotoana hiasana samirery izy.
Ity dia iray amin'ireo fotoana vitsy izay eritreretintsika fa ny ex tampoka volana vitsivitsy taty aoriana dia mety ho zavatra tsara!
Raha tena naka ny volana vitsivitsy hisarahana izy, dia hajainay tokoa ny bandy manao an'io.
Mety nanokana fotoana manokana izy hifantohany amin'ny tenany, hisaintsaina ny fihetsiny eo amin'ny fifandraisana, ary tena hiditra amin'ny safidy safidy salama kokoa.
Raha anisan'ny antony nisarahanareo ny antony sy ny fomba fiainany dia mety nifandray izy izao hampahafantatra anao fa te hanandrana indray izy ary nametraka ny asa nilaina.
Ohatra, mety nisaraka ianao satria nanomboka nifoka rongony sy nijanona tara foana izy. Raha najanony io fihetsika io dia tiany ho fantatrao satria mety hidika izany fa haverinao izy.
Angamba nahazo asa vaovao izy, najanona ny fahazaran-dratsy sasany, na vonona ny hanolo-tena anao. Tiany ho fantatrao fa nanaraka ireo dingana ireo izy mba hahatongavana ho mpiara-miasa tsaratsara kokoa aminao, satria tiany homena fotoana hafa ianao.
Diniho ny fahaizanareo roa tonta ankehitriny, ary koa ny fahitanareo ny fahaizany manolo-tena amin'ity fomba vaovao ity.
Raha miala amin'ny sigara izy telo andro lasa izay, aza matoky azy haingana loatra! Mety tsy ho vonona ny hanao sorona maharitra ilaina izy mba hampandeha ny zavatra.
10. Te-hihombo fotsiny izy.
Indraindray, tsy maintsy ekentsika fa mipoitra fotsiny ireo taloha, satria te hanao firaisana izy ireo.
Tsy mila miditra antsipirihany be dia be eto isika, satria efa niaina izany isika tamin'ny fotoana iray!
Raha mandefa hafatra voalohany aminao izy mandritra ny volana maro ary amin'ny 2 maraina, na mamo izy, na manome hevitra na mikorisa ny hafatra, misy vintana matanjaka be fa te hiara-matory aminao indray izy.
Raha tsy maninona ianao ny matory miaraka aminy dia tadiavo izany. Raha tsy azonao antoka dia mety ho tsia.
Fantaro ny fahamendrehanao ary aza milamina amin'ny firaisana ara-nofo amin'ny olona taloha raha afaka misafidy daty miaraka amina lehilahy iray izay tena liana aminao!
11. Very hevitra izy momba ny fisarahana.
Raha tampoka na misavoritaka ny fisarahanareo dia misy ny fahafahanareo roa mila fotoana kely handaminana azy io.
Tena azo atao izany fa, nandritra io fotoana io, dia tsapany fa tsy tena nikatona mihitsy izy hoe nahoana no nifarana ny fifandraisana.
Mety hiverina izy volana maro taty aoriana satria mila mazava izy. Mety te-hiresaka aminao momba ny zava-nitranga sy ny antony fotsiny izy, mba hahafahany mametraka azy rehetra am-pandriana ary mandroso.
Ity dia fomba tena matotra, ary fomba fanodinana mahasalama, raha mahazo aina amin'ity karazana resaka ity ianao.
12. Tsy azony antoka izay tadiaviny.
Mety nifandray taminao ny anao taloha rehefa nisaraka nandritra ny volana maro satria tsy azony antoka ny zavatra tsapany.
Tsy voatery te hiaraka hiaraka izy, fa tsy tiany ianao tsy miaraka.
Raha mahatsiaro misavoritaka izy momba ny zava-nitranga teo aminareo roa, ary tsy fantany izay vokany tadiaviny, dia mety haka fotoana fotsiny izy ary handrefesana ny vibe hahitana ny fihetsikao.
Raha mientanentana aminao ny hihaino azy dia mahazo fotoana hafa miaraka aminao izy ary mety ho tsapany fa izany no tena notadiaviny.
Toy izany koa, raha manakatona azy ianao ary manazava fa tsy miara-miverina mihintsy ianao dia hanampy azy hanaiky fa tsy safidy tokony hodinihina akory izany ary ho hitany izay tadiaviny amin'izany.
Mbola tsy azonao antoka ny antony nahatonga ny olon-tianao niverina na hanao inona momba azy? Miresaka an-tserasera amin'ny manam-pahaizana momba ny fifandraisana avy amin'ny Relationship Hero izay afaka manampy anao hahalala zavatra. Tsotra.
10 Tsy misy Bullsh * t manasonia ny anao taloha Te hiverina ianao: Ahoana no hahalalana tsara
ahoana ny fijanonana amin'ny fahatsapana ho meloka amin'ny famitahana
rehefa raiki-pitia ianao
fanaintainana be dia be ka amin'ny fitiavana
ny zanako vavy 20 taona dia tsy manaja
ahoana no nahatonga an'i mrbeast nanankarena